The aerolith, ihe omimi a na - edozighi | Netwọk Mgbasa Ozi
Ihe ijuanya na ihe omimi a na-edozighi. Okike, ma ọ bụ ọdịdị abụọ, akwụsịghị iju anyị anya. Taa, anyị na-ekwu maka okwu butere ọtụtụ esemokwu n’oge ya ma bụrụkwa ihe enigma a na-edozighi. Ọ gbasara aerolite. Ọ bụ nnukwu igwe akpụrụ mmiri nke si na mbara igwe daa ma na-ebute mmebi n'ihi nha ya. Akpọrọ ya aha ya dịka ọ dị ka meteorite.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị gbasara ihe omimi nke aerolith yana ihe sayensi na-ekwu maka ma ọ bụ ezigbo ihe ọhụụ ma ọ bụ ihe egwuregwu. Want chọrọ ịmatakwu?
1 Aerolito, ihe omimi di omimi
2 Ekwe omume mbido nke aerolith
3 Eziokwu ma obu ugha?
4 Aerolith ikpe
Aerolito, ihe omimi di omimi
Kpa ye na ọnọdụ nke ọdịda nke ihe omimi buru ibu buru ibu, enweghi amaghi otu o ga esi buru mbido ya. Ọ bụrụ na ọ bụ mgbanwe ihu igwe na mgbanwe ndị ọ na-enwe na ihu igwe nwere ike ịkpụ mgbochi ice ndị a na elu n'ihi oke okpomọkụ na mberede, ma ọ bụrụ na ọ bụ mmiri mmiri na ụgbọ elu ụgbọ elu karịa mgbanwe nke okpomọkụ na elu tụgharịa na ice ngwa ngwa, wdg.
E chegogo na ọ bụ ihe ọchị, foduru nke comets nke ihe mejupụtara ọzọ ma ọ bụ ọbụlagodi. Ihe doro anya bụ na ajụjụ ndị a Mmalite ya na usoro aerolith ka amachabeghi. Ikwesiri iji isi gi chee echiche ma jiri sayensị. Ihe omume a mere na Jenụwarị 8, 2000. N’afọ ahụ, e buru amụma njedebe nke ụwa (dị ka ọtụtụ oge ndị ọzọ) na mgbanwe mgbanwe ihu igwe, ebili mmiri mita 100, ịrị elu mmiri, wdg.
Ngabiga nke afọ 2000 nwere ike imechu ndi nile na ebu amụma banyere njedebe nke ụwa ọnụ, ma eleghị anya, ọ bụ ihe ọchị. Ihe omuma di iche nke n’eme ka uwa meputa igwe igwe nwere ike yie ihe nzuzu ma me ka ndi mmadu ju ujo n’ihi na, n’ezie, njedebe nke uwa n’abia.
Ọ bụ ihe ịtụnanya na-agaghị adịte aka. O mere kwa ụbọchị n'oge ụbọchị ndị a site na Jenụwarị 8 ruo 17 nke otu ọnwa ahụ. Ihe kariri okwu 50 mere na Spain na, otutu, na Valencia. Otú ọ dị, ọtụtụ akụkọ ndị mere bụ wayo na egwuregwu, nke na-egosi na ihe a na-ahụ anya dịkwa oke.
Ekwe omume mbido nke aerolith
Anyị ga-enyocha site n'echiche kachasị dị mkpa maka nguzobe ma ọ bụ nwee ike ịmalite mmalite ikuku. Nke mbụ bụ iji nyochaa ma enwere ike ịmepụta ya site na nsonaazụ nke mgbanwe ihu igwe. Ọ bụ eziokwu na mgbanwe ihu igwe, dị ka aha ya na-egosi, na-eweta mmetụta na mgbanwe ndị a na-atụghị anya ya na ihu igwe ụwa. Nke a apụtaghị na nsonaazụ ndị a na-ewepụta nwere ike ịga megide iwu nke physics. The aerolith na-emegide ha.
Mgbe akụ mmiri ígwé ojii na-apụta, ọ na-emepụta site na mmiri nke mmiri na-adịkarị ala na-enye nsogbu ikuku dị ala dị na oge ụfọdụ. Igwe ojii nwere kristal ice amorphous ndị a site na nchịkọta nke ụmụ irighiri mmiri na ngwa ngwa karịa ọnụego nkịtị, yabụ Kristal ice a ma ama nwere usoro hexagonal enweghị oge iji mepụta.
Ozugbo ice flakes na-etolite, ha na-adaba n'okpuru ibu nke ha, yabụ, oke ha enweghị ike ibu oke. Ọtụtụ n’ime ụdị ifufe mmiri a buru ibu karịa ka ha na-eche n’ihi na ha na-anọgide na-eri nri na ụmụ irighiri mmiri ndị ọzọ na-asọkọta ma sonyere ha ka ha si n’igwe ojii ahụ na-ada. Ogologo nke akụ mmiri igwe na-adabere kpamkpam n'ihe ndị dịka ọnọdụ okpomọkụ n'oge ahụ, oke mmiri mmiri na gburugburu ebe obibi, ịdị elu nke igwe ojii na mgbanwe nke nrụgide nke ikuku ma ọ bụ ịdị adị nke ihu.
Ọ bụrụ na akụ́ mmiri ígwé ahụ daa, ya onwe ya, na-eri nri ụmụ irighiri mmiri ndị ọzọ, o nwere ike ito ibu ka ọ na-ada, ma enweghị ike iru nha karịa nke bọọlụ tenis. Agbanyeghị, aerolith bụ nnukwu ihe. O doro anya na ọ bụ ihe na-agaghị ekwe omume na ọ nwere ike ịpụta na igwe ojii, ebe ọ bụ na ọ ga-abụ na ọ ga-adị obere karịa ọ ga-emeriworị nguzogide nke ikuku ma kpalie ya site na ike ndọda. Dị ka ọ na-eri na ụmụ irighiri mmiri ndị ọzọ dị na mbara igwe ka ọ na-ada iji mụbaa ogo ya, ọ gaghị ekwe omume na n'oge dị mkpirikpi mkpịsị ice nke nha ahụ nwere ike ịpụta.
Eziokwu ma obu ugha?
Ihe a niile na-enye echiche siri ike na ikuku a bụ nsonaazụ nke ọchị nke ndị chọrọ ịkụnye ụjọ na ndị mmadụ mgbe ọbịbịa nke puku afọ iri ọhụrụ na njedebe nke ụwa. Ọ bụrụ na m bụ meteorite Enwere ike nyochaa ya ma jiri ya tụnyere foduru nke nkume site na ụfọdụ ihe dị na mbara igwe. Site na N'aka nke ọzọ, ndị bịara abịa ga-enwe ụzọ ọzọ iji dọọ ndị nwere ọgụgụ isi aka karịa ịtụpụ akpụrụ mmiri ma lekwasị anya na peninsula.
Na echiche nke mmiri mmiri na ụgbọ elu azụmahịa, karịa nke otu. O nwere ike ịbụ na mmiri mmiri na-apụta n'ụgbọelu, mana ha bụ ihe omume pụrụ iche karịa na ọ naghị adịkarị na ọ na-eme n'oge dị mkpirikpi ma a maghị ihe banyere ya. Ọ bụrụ na ọ nwere ike ịbụ n'ihi mmiri mmiri, ọ nwere ike ịbụ ikpe ahụ, mana ọ nweghị ụdị mgbochi ice nke nha a. Ihe mbụ, mgbe ịnwụ mmiri, ọ ga-apụta na jet na n'ahịrị. Ọbụna ma ọ bụrụ na anyị chere na ọnọdụ okpomọkụ dị na elu nwere ọdịiche dị ukwuu na nke dị n'ime ụgbọelu ahụ, ọbụlagodi na akpụrụ mmiri ga-etolite, ha agaghị abụ bọọlụ buru ibu karịa bọọlụ tenis.
Onweghi uzo a ga - edobe mmiri n’igwe n’udi di nkpa ka o nwee ike imeputa onu mmiri oke nha.
Nke mbụ n’ime ha dara na Soria na Jenụwarị 8, 2000. Twobọchị abụọ ka e mesịrị, na Seville otu aerolith kpuru ihu nke Fiat Uno, ebe onye nwe ya drankụrụ kọfị. Na nke iri na abụọ ka emere ihe omume ahụ n'ụlọ nkwakọba ihe ụlọ ọrụ na l'Alcúdia, na 12th na Elx, na 13th na La Unión (Murcia), na 14th na Enguera na Xilxes, na 15th na Cádiz na Huelva na 6th na Algemesí.
Ihe a niile kpatara ụjọ na ụjọ na akụnụba ma ọ bụ iguzosi ike n'ezi ihe nke anụ ọhịa nwere ike mebie. You nweghị ike iji nwayọ gafere n'okporo ụzọ na-enweghị atụ ụjọ ile anya ma ọ bụrụ na mgbochi ice daa n'isi gị.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ụdị ihe a ka mma were ọchị ma ghara ịkọ njedebe nke ụwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Aerolite